अन्तर्क्रियात्मक De 360० डिग्री भिडियोको भविष्य | Martech Zone
बुधवार, अगस्त 24, 2011 आइतवार, अप्रिल २,, २०१। Douglas Karr
यो एक राम्रो अद्भुत प्रविधि हो जब तपाईं सम्भावनाहरूको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईले बहुविध स्टोरीलाइहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ र प्रयोगकर्तामा क्लिक गर्नुहोस् र अर्को प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक हॉरर फिल्म को एक हेक को लागी बनाउन सक्छ! 🙂
See 360० ° भिडियोको साथ पहिले जस्तो संसार कहिल्यै हेर्नुहोस्। के तिमि सोच्न सक्छौ? व्यक्तिहरू आफू बस्ने सडकको 360 360० फोटोहरू हेर्न, वा तिनीहरूको अर्को छुट्टी गन्तव्य पत्ता लगाउन मन पराउँछन्। कत्ति रमाईलो, यदि यो एक पूर्ण छवि of 360० was भिडियो एक स्थिर छवि को सट्टा थियो? ° XNUMX० ° भिडियोको साथ तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको लागि अन्तिम अनलाइन अनुभव सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। वातावरण वा घटनाहरूको वास्तविक-जीवन सेटिंग्स साझा गर्नुहोस्।
अधिक जानकारीको लागि, कुनै एकमा जानुहोस् सब भन्दा लामो डोमेन नाम मैले कहिले पनि फेला पारेँ, यलोबर्ड।
टैग: Degree 360० डिग्री भिडियो360 भिडियो